दुधसंग भूलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा दुधसंग भूलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा
दुध मानव मात्र नभएर सम्पूर्ण स्तनधारी जीवहरूको पहिलो आहार हो। बच्चामा हुँदा मान्छेले आमाको दुध खान्छ भने ठूलो भएपछि अन्य जनावरको दुध पिउँदछ ।दुधलाई आधुनिक पोषण विज्ञानले समेत सम्पूर्ण आहारा मानेको छ । हुन पनि दुधमा हाम्रो शरीरको विकासको लागि चाहिने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्वहरू विद्यमान छन् । दुधको सेवन सबै उमेर समूहका व्याक्तिहरूका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक मानिएको छ । यदि तपाईं पनि प्रत्येक दिन दुध पिउने गर्नुहुन्छ भने तपाईले पनि दुध पिउने कला सिक्नु पर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त्य पौष्टिक पदार्थ मानिएको भए पनि दुध पिउन नजान्दा अनेकै रोगहरू उत्पन्न हुन्छन् । विशेष गरि दुधसंग के खाने के नखाने भन्ने कुराको जानकारी नहुँदा दुधको सेवन विषाक्त बन्न सक्छ । यसर्थ आउनुहोस हामी पनि जानौँ दुधसंग भूलेर पनि खान नहुने यी खानेकुराहरू ।
१.दहीः दुध र दही दुबै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक खानेकुराहरू हुन् । तर, दुबै सँगसँगै खाँदा फाईदाको साटो नोक्सान ज्यादा हुन्छ । यसो हुँनुमा दहीमा विद्यमान ब्याक्टेरिया र अम्लले गर्दा दुधलाई डीन्याचूरेट गर्ने वा फटाईदिने हुँदा यो फाटेको दुधले एसिडिटी, ग्यास, बान्ता, झाडा–पखाला, वाकवाकी गराउने हुन्छ ।
२. नुनः दुधसंग नुनको सेवन पनि अत्यन्त हानीकारक मानिन्छ । दुधसंग नुनको सेवन गर्दा पेटको भित्री पत्र वा छालाको संक्रमणको उच्च जोखिम हुन जान्छ । वैज्ञानिकहरू छालामा आउने दाँद, फोकाफोकी, घाउ, खटिरा, स्वरीयासीस, छाला चिलाउने, एक्जिमाजस्ता समस्याहरूलाई दुध र नुनको विरूद्ध आहार सेवनले उत्पन्न भएको समस्या मान्ने गरेका छन् ।
३. तेलः दुध र तेलको योगलाई पनि चिकित्सा विज्ञानले राम्रो मान्ने गरेको छैन् । दुध र तेललाई एकसाथ मिलाउन सकिदैन । दुधमा विद्यमान पानी तेलमा तैरिन्छ र एकसाथ खान खोज्दा यो योग स्वास्थ्यका घातक हुन जान्छ । यसैगरि दुधसँग उच्च मात्रामा तेल भएका खाने कुराको सेवन पनि उचित मानिन्न । यदि खाईएमा पेट ढुस्स हुने, ग्यास्ट्राईटिस हुने, आँउ पर्ने, भुँडी हुडल्ने जस्ता समस्या देखा पर्दछन् ।
४. तीलौराः तीलको लड्डूलाई तीलौरा भनिन्छ । तीलौरा पनि उच्च मात्रामा तेल र प्रोटिन भएको खाने कुरा हो । तीलौरा र दुधको सेवन गर्ने गर्दा तेल र दुधको विरूद्ध प्रकृति एक आपसमा नमिल्दा भोजनविरूद्ध हुन पुग्दछ र स्वास्थ्य नाश गर्दछ ।
५. सातुः हुँनत दुध र सातुको मिश्रणलाई धेरै लामो समयदेखि खाईदै आईएको छ । तर सातु र दुधको संयोगलाई आरोग्यबर्धक योग मानिएको छैन । सातुमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाईने र दुधमा पनि उच्च मात्रामा प्रोटिन र चिल्लो पाईने हुँदा दुबैलाई एकसाथ खाँदा पचाउन गाह्रो हुने गर्दछ । सातु र दुधलाई एकसाथ खाँदा पेट दुख्ने, भूँडी हुडल्ने जस्ता समस्याहरू देखा पर्दछन्।
६.माछा, मासु अण्डाः दुध र मांशहार अत्यन्त विरूद्ध आहार हुन् । मांशहारी खानेकुरा र दुधको सेवन गर्ने गर्दा दुबै खानेकुरामा विद्यमान उच्च प्रोटिनको पाँचन ठिकसंग नहुँदा ज्यादा मात्रामा विजातिय पदार्थ बन्ने र पाचन सम्बन्धी समस्या देखा पर्ने गर्दछ । माछा, मासु, अण्डा आदिको सेवन पश्चात वा एकसाथ दुध पिउँदा फूड पोईजनिङ्ग हुने, पेट दुख्ने र शरीरमा दुबी आउने सम्भावना रहन्छ ।
७.फलफूल एवं सलादः आजकाल दुधसँग विभिन्न किसिमका फलफूलहरू मिलाएर बनाईएको मिल्कसेक वा स्मूदी बनाएर खाने चलन छ तर यो चलन स्वास्थ्यको दृष्टिले त्यति उपयूक्त होईन । कारण के छ भने फलफूल वा सलादहरूको प्रकृति चिसो हुन्छ भने दुधको प्रकृति तातो हुन्छ । यसरी विरूद्ध प्रकृतिको खानेकुराहरू खाँदा भोजनविरूद्ध हुनजान्छ र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउँदछ । यस्तै दुधसंग अमिला वा अम्लीय प्रकृतिका खानेकुराहरू खाँदा दुध तुरून्तै फाट्दछ र विरूद्ध बन्न पुग्दछ ।
८.दालः कालो मासको दाल, गहत र मुङ्गसंग दुधको सेवन कहिल्यै गर्नु हुँदैन । दाल खाँदा दालमा विद्यमान प्रोटिन र दुधमा विद्यमान प्रोटिनको पाचन विधि फरक हुने हुँदा यसले हाम्रो पाँचन तन्त्रमा नकारात्मक असरहरू पैदा गराउँदछ र पेट खराव हुने गर्दछ ।
९.अमिला फलफूलः कागती, तित्री, स्ट्रबेरी, भूईकटहर, सून्तलाजस्ता अमिला प्रजातीका फलफूलहरूको सेवनसँग दुध सेवा गरे तुरून्त फाट्न गई विषाक्तता पैदा गर्दछ । फलतः रूघा, खोकी, एलर्जी, दम, वाकवाकी, वान्ता, अपच अजीर्णताजस्ता समस्याहरू पनि देखा पर्दछ ।
१०. बेलः बेललाई पनि दुधको साथमा खानु हुँदैन । दुधसंग बेल खाने गर्दा बेलमा विद्यमान चोपले दुधको प्रोटिनलाई डीन्याचूरेट गर्ने गर्दछ र यो मिश्रणलाई विषाक्त बनाई दिन्छ ।
११.नौनी घ्यू वा मक्खनः हामी मध्ये धेरैले नाश्तामा अक्सर गरेर ब्रेड र बटरको साथमा दुध लिने गरेका हुन्छौँ । तर, यो बानी स्वास्थ्यको दृष्टिले त्यत्ति राम्रो होईन किनकी यसरी खाँदा दुबै भोजनमा विद्यमान उच्च प्रोटीन र चिल्लोका कारणले भोजन गरिष्ठ बन्न पुग्दछ । जसले पाचन क्रियालाई प्रभावित पार्न सक्दछ । चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार पनि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट र फ्याट ज्यादा मात्रामा एक साथ लिनु हुँदैन ।
१२. कटहरः दुध पिएपछि वा दुधको साथ रूख कटहरको सेवन गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा पाँचन प्रणालीमा त समस्या उत्पन्न गराउँदछ नै साथै मुटुरोग श्वास रोग, दाद, चिलाउने, एग्जिमा र अन्य छाँला सम्बन्धि विकार उत्पन्न गराउदँछ ।
लेखक भरतपुर–१ वागिश्वरीस्थित योगी नरहरिनाथ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयको मेडिकल डाईरेक्टर हुन्।